I-North Durras Beach Cottage - I-Airbnb
I-North Durras Beach Cottage
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguVictor
Indlu esemaphandleni yabucala, esecaleni eNorth Durras entle.
Ipaki entle ekuthiwa yiMurramarang National Park enemizila yokuhamba eqala ngaphandle nje komnyango ongaphambili. I-North Durras Beach kunye neDurras Lake phantsi nje kwendlela.
Kulungile ukuba ufuna ukusebenza uze uphume okanye wenze nje izinto zibe lula uze uphumle ngoxolo nokuzola.
Le ndlu inendawo evulekileyo, ekhanyayo/igumbi lokulala elinomnyango ophumela ngaphandle. Iveranda encinci ejonge ngaphambili egadini inetafile ephandle nezitulo kunye neendawo zokoja ukuze zisetyenziswe ziindwendwe. Le ndawo ibalungele abantu abathandanayo okanye umntu ohamba yedwa. Kwakhona ndiyakuvuyela ukwamkela umzali(abazali) onomntwana omnye/usana/usana, okanye umzali omnye onomntwana omdala.
4.96 out of 5 stars from 583 reviews
4.96 · Izimvo eziyi-583
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi583
Unxweme yimizuzu eyi-2 ukuya kweyi-3 xa usiya echibini laseDurras. I-Depot Beach yimizuzu nje embalwa xa uhamba ngemoto okanye imizuzu eyi-15 ukuya kweyi-20 xa uhamba ngeenyawo kwi-Pebbly Beach kancinci.
Njengendlu ehlala abantu ababini mna, okanye umntu endisebenza naye uDee, amaxesha amaninzi ndiza kuba kufutshane ibe ndifumaneka ukuze ndincede ngayo nayiphi na imibuzo. Nangona kunjalo, zombini ezi zindlu ziyimfihlo ibe zineendlela ezahlukeneyo zokufikelela, ngoko asizukubangela uxolo lwakho nokuzola. Ngokwembono yeCOVID-19 oku kuthetha ukuba kulula ukuthobela izikhokelo ezicetyiswayo zokungasondeli ebantwini ngoku. Kwakhona qaphela ukuba ukucoca okongezelelekileyo kuzo zonke iindawo Kwindlu Esemaphandleni Yondwendwe ngento yokubulala iintsholongwane yesibhedlele yenziwa emva kokuhamba kondwendwe ngalunye ukuze kuncitshiswe nawuphi na umngcipheko wokosuleleka.
Sinenja eneminyaka eyi-12 ubudala - uSasha. Sizama ukuqinisekisa ukuba akazikhathazi iindwendwe kodwa kusenokwenzeka ukuba angatyelela ukuze afumane iikati ezingakumbi. Ukuba le yingxaki kwaphela nceda usazise kwaye siza kuqinisekisa ukuba akahambi.
Njengendlu ehlala abantu ababini mna, okanye umntu endisebenza naye uDee, amaxesha amaninzi ndiza kuba kufutshane ibe ndifumaneka ukuze ndincede ngayo nayiphi na imibuzo. Nangona k…
Inombolo yomthetho: PID-STRA-2695
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Durras North